Diyadii ugu badneyd ee taariikhda Khaliijka oo ay ururiyeen qabiilka Al-Awazim ee Kuwait… – Hagaag.com
Diyadii ugu badneyd ee taariikhda Khaliijka oo ay ururiyeen qabiilka Al-Awazim ee Kuwait…
Posted on 2 Maajo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Siddeed iyo toban sano ka hor ayaa suxufiyad u dhalatay dalka Kuwait oo la oran jiray Hidayah Sultan al-Salem lagu toogtay baabuurkeeda. Hadaba olole lacag ururin ah ayaa ka socday Kuwait waxay awoodeen inay ururiyaan ” diyadii ugu weyneyd taariikhda Gacanka Khaliijka” si loo sii daayo qofkii geystay dilkaasi – oo ahaa sarkaal hore ee Kuwaiti Khalid Naga al-Azmi.
Suxufiyada Hidayah Sultan Al-Salem ayaa aheyd shakhsi caan ka ah dalka Kuwait, waxay soo noqotay tifaftiraha wargeyska todobaadlaha ah ee Al-Majalis iyo u dhaqdhaqaaqe xuquuqda aadanaha oo caan ku aheyd u doodida xuquuqda siyaasadeed ee haweenka Kuwait.
Laakiin sannadkii 2001-dii, waxaa la toogtay iyada oo u socotay halkii ay ka shaqeyneysay. dhowr maalmood ka dib, saraakiil ka tirsan dowladda ayaa ku dhawaaqay in sarkaal uu qirtey in uu ka dambeeyey dilkeeda asaga oo sabab uga dhigay maqaal ay ku aflagaadeysay haweenka qabiilkiisa.
Ninka ayaa ah Khalid Naga al-Azmi, oo xubin ka ah qabiilka Kuwait Al Awazim. Maanta, magaciisa wuxuu qabsaday baraha bulshada ee Khaliijka kadib markii lagu guuleystay isku day loogu soo celinayo xuriyadiisa.
Laba maalmood gudahood ayaa qabiilkiisa waxay billaabeen olole tabaruc ah oo lagu bixinayo diyada suxufiyada, waxayna uruuriyeen lacag dhan 10 milyuun oo dinar-ka Kuwait oo u dhigma ($ 33 ​​milyan) – lacagtan diyada ah ayaa lagu tilmaamay tan ugu weyn taariikhda Gacanka Khaliijka.